Siza kwakha njani i-backlink ngo-2018?
Imarike yedijithali yindawo eguquguqukayo eqhubekayo apho izilungiso ezintsha zitshintshe imithetho yonke yemidlalo. Njengomnini wewebhusayithi, kufuneka wazi ukuba uza kuyidinga ukwakha i-backlink ngonyaka ozayo we-2018. Amacandelo esiza kuxoxa ngawo kweli nqaku anokukunceda ukuba ufikelele kwizinga eliphezulu ngaphandle kokuba ufikelele kubanikazi bewebhusayithi abanethemba lokufumana enye i-backlink esemgangathweni.
Hayi ukulandela i-backlinks
Ubeminyaka obudala xa izakhi zangasemva zakhiwa ngezindlela ezilula zibonakala ziphela. Namhlanje, ukufumana unxibelelwano olufunekayo ukuze unikeze umxholo womgangatho, fumana umthombo wewebhu apho ungafaka khona izikhonkco zakho nokuseka ubudlelwane bezoshishino kunye nomnini wewebhu. Iiwebhsayithi ezigunyazisiweyo njenge-Huffington Post, i-Forbes kunye nabanye zisebenzisa isicwangciso soqhinga ngokubhekiselele kuzo zonke izixhumanisi zakho aziyi kuba namalathisi alandelayo. Kuthetha ukuba iikhonkco zakho aziyi kudlula naluphi na inani njengoko zibhalwa njengekhowudi. Nangona kunjalo, enyanisweni, i-backlinks i-backlink inexabiso elithile kwi-CTR. Akuyi kuphakamisa iphepha elikumgangatho ukususela kungabikho ijusi yoluncedo oluza kwisiza sakho.
Kukho iindlela ezibalulekileyo zokwakha i-backlink ezithathayo kwaye zinexabiso elibalulekileyo kwiziko lakho lokusesha injini.
Ukwakha i-backlinks ngeGoogle Amadokhumenti
Kubonakala ukuba i-Google Amadokhumenti ingaba yindlela ebalulekileyo kunye nelula yokufumana i-backlinks. Into efunekayo kuphela ukuqinisekisa ukuba ukwabelana ngepropati yakho noluntu. I-Google inikezela phambili kwimveliso yayo kwiziphumo zophando. Yingakho ngokudala uxwebhu lweGoogle kunye nama-backlink kumaphepha akho ewebhu okanye umxholo uya kukunceda ufumane i juyisi yekhonkco kwiwebhusayithi enegunya eliphezulu, oko kukuthi i-Google. Kufuneka ube namazwi angama-300 kwisicatshulwa sakho. Faka iifayile eziphezulu eziphezulu zokukhangela ezizama ukubeka uluhlu kumxholo wakho. Emva kokuba idokhumenti yakho idalwe, kufuneka uhambise i-URL kwi-Google kunye ne-Bing.
Ukwakha i-backlinks kwiziko le-Google
Imveliso enye yeGoogle enokukunika ixabiso leSayithi zeGoogle. Kukunika amandla okudala iwebhusayithi phantsi kwegama legama le-Google, njenge-Google Amadokhumenti. Ngokuphambene neGoogle Amadokhumenti, iiSayithi zeGoogle ikunika ithuba lokwenza izilwanyana zakho zangaphambili. Njengoko uphando olutshanje lubonisa i-Google Sites zivumela iiwebhsayithi ezifakwe kwiincinci zokuncintisana kakhulu ukuba zibeke kwi-TOP-20 iziphumo zophando. Kuthetha ukuba unokufumana uluhlu oluninzi kwiziphumo ze-Google TOP ngokusekelwe kwikota ethile yokukhangela. Ukusekwa kwiphepha lesibini le-Google SERP linokutsala abathengi bakho kwaye bazise ezinye zezithuthi eziyingozi kwindawo yakho.
Ukwakha i-backlinks ngokusebenzisa i-LinkedIn
Yindlela entsha yokukhawulela i-juice kwisiza sakho, kwaye mhlawumbi sinokuqala okukuxelela yona. Le ndlela ikunika ithuba lokuphucula ukuqaphela igama lakho lomtsalane ekubhekiselele kwiimpawu zegama eliphambili legama eliphezulu. Ngokukhawuleza xa ungena kwi-LinkedIn, ikunika amandla okudala i-akhawunti yenkampani. Ngexa udala i-akhawunti yakho yezoshishino, kufuneka uyibeke ngendlela ejolise kwii-key words volume. Njengoko udidi lwe-LinkedIn lubeka kakuhle kwiGoogle, unethuba elikhulu lokufakwa kwiindawo ezi-5 zokuqala ze-SERP Source .